Premier League: Tababarihii Labaad Oo Toddobaad Gudihii Shaqada Laga Caydhiyey - Gool24.Net
Premier League: Tababarihii Labaad Oo Toddobaad Gudihii Shaqada Laga Caydhiyey
Horyaalka Premier League ayaa waajahaya xaalad isbeddel dhinaca tababareyaasha, waxaana hore macallimiintoodii u caydhiyey Arsenal iyo Tottenham, laakiin hawshaas ayaa noqonaysa mid furan oo kooxo kalena ay sidaas oo dariiqaas oo kale maraan.
Kooxda ugu hoosaysa horyaalka Premier League ee Watford ayaa maanta ku dhawaaqday inay shaqadii ka caydhisay tababaraheedii Quique Sanchez Flores kaddib markii Sabtidii ay Southampton oo 2-1 kaga adkaatay.
War-saxaafadeed uu soo saaray Guddoomiyaha Watford, Scott Duxbury ayaa waxa lagu sheegay in Quique uu ahaa shaqsi wanaagsan oo aanu mugdi ku jirin doonistiisa ah inuu saamayn togan ku yeesho kooxda, laakiin natiijooyinka ay kooxdu ka keentay horyaalka xili ciyaareedkan ay sabab u noqotay in go’aankan uu soo baxo.
Watford oo siddeed dhibcood oo kaliya ka heshay 14 ciyaarood oo ay yeelatay xili ciyaaareedkan horyaalka Premier League, ayaa waxa uu guddoomiyuhu sheegay in si degdeg ah ay u magacaabi doonaan tababaraha beddelaya, go’aanka shaqo ka caydhintana ay qaateen iyagoo tixgelinaya rabitaanka jamaahiirta oo warqad furan ku dalbaday in la eryo Flores.
Chris Hughton ayaa la filayaa inuu noqdo tababaraha beddelaya Sanchez Florez, laakiin isana niyad-samaan kuma qabaan taageereyaashu maadaama xili ciyaareedkii 2-15-16 uu waqti gaaban soo layliyey, isla markaana 10 kulan uu guuleystay hal kulan oo kaliya.